24 XIDIGA WAXYAABAHA LAGA HELI KARO Fikradaha Fikradda ee loogu talagalay Raga iyo Dumarka - Fikradaha Fikradaha Madadaalo
24 XIDIGA WAXYAABAHA LAGA HELAA Fikradaha Fikradda ee loogu talagalay Ragga iyo Haweenka
Sonitattoo November 23, 2016
Markaad ka fekereyso in aad hesho tattoo isweydaarsi, waxaa jira waxyaabo ay tahay in aad tixgeliso ka hor intaan la gelin. Nooca naqshadda aad u baahan tahay iyo habka aad u rabto tattoo-ka in la dhigo waa qaar ka mid ah waxyaalaha aad u baahan tahay inaad marka hore tixgeliso.
1. Qurxinta isku dhafan ee Tattoos ee Lamaanayaasha
2. Tattoo ku habboon cute
Waxaad ku heli kartaa tattoo-is-dhaafsi leh asxaabta iyo xitaa xubnaha qoyska. Qurxinta tattoo u dhiganta waa habka ay u egyihiin marka aad ku aragtid jirka. Waxaad sidoo kale meeleyn kartaa meelaynta qayb kasta oo ka mid ah jirkaaga.
3. Tattoo isweydaarsiga ah
Dumarku waxay yeelan karaan tattoo isku mid ah. Xitaa xaasaska iyo haweenkuba waxay sidoo kale yeelan karaan isbarbar dhigidan #Tattoo si aad u eegto si fiican iyo isku xirnaanta.
4. Tattoo isku dheelitir leh
Dhalinyaradu waxay leeyihiin fursad wanaagsan marka ay leeyihiin shaati-dheere oo isbarbardhigaya. Haddii aad la yaaban tahay # deynsi si aad u sameysid tattoo gaar ah oo soo jiidasho leh.
5. Tattoo isku dhejis ah
Waxa ugu muhiimsan waa inaad ka fekerto haddii tani ay tahay tattooada ugu horeysa ee aad is leedahay waa sida quruxsan ay u ekaan doonto.
6. Tattoo isku dheelitiran
7. Tattoo u dhigma qurux badan
Shakhsiyaadka qaarkood, waxay mar walba raadiyaan wax aan caadi ahayn oo ka caawin kara inay isku xiraan si fiican. Sidoo kale, tattoo isweydaarsiga ah ayaa ka caawin doona inay ka soo hor jeedaan dadka badan marka la arko.
8. Tattoo isweydaarsiga gaarka ah
Qaar ka mid ah dadku waxay leeyihiin xusuusta oo u dhiganta shaati-galada marka ay ka lumaan qof muhiima gaar ah noloshooda. Shakhsiyaadka kale waxay dhiiri galin karaan jimicsiyada la midka ah si ay u xasuusiyaan waqti cayiman noloshooda.
9. Taraawiixa isweydaarsiga
Waxaa jira waqtiyo markaan dooneyno in aan si isdabajoog ah loola dhaqmo. Markaan leenahay tattoo isweydaarsi oo sidan oo kale ah, qof kastaa wuxuu dooni lahaa inuu nala eego. Tani waa quruxda ay leedahay shaati-sharaxyo waaweyn
10. Tattoo matching midabka leh
Tattoo-ka midab-kala-duwan ee loo yaqaan 'tattoo matching tachoo' waxa loola jeedaa inaad indhaha cad u leedahay waxyaabo fiican. Sida quruxda, waxba ma dareemeyso sida fiican ee leh tattoo is-beddelka.
11. Tattoo u habboon oo tafaasiil ah
12. Suunka isweydaarsiga tattoo
Waxaad arki doontaa qof walba inuu kuu eego markaad leedahay tafaasiishan ku habboon ee tattoo kaa caawin doona inaad meel kasta ka istaagto. Naqshadu waa mid gaar ah oo faahfaahin kasta oo ku saabsan tattoo in sidoo kale waa qabow. Miyaadan u malaynaynin?
13. Tattoo u dhigma qurux badan
Qaar ka mid ah dadka, ma haystaan ​​wax xujo ah oo ku jira dukaanka qolka tattoo. Waxay fikirkan ku leeyihiin madaxyahannada qolalka tattoo ay yihiin dukaamo yaryar oo u oggolaanaya gawaarida iyo rookaha dhismadooda. Si kastaba ha noqotee, leh tattoo fudud ee fudud, waxaad fahmi lahayd waxa ay ka dhigan tahay in tattoo weyn.
14. Tattoo isweydaarsi leh
Ma aragtay dad leh nooca tattoo ah? Markaad rabto in aad eegto qaaliga oo leh tattoo, waxaad raadineysaa naqshad ah sida quruxda badan. Tani waa sababta ay boqolaal qof ay hadda u isticmaalayaan tattoo this.
15. Tattoo udhaxeeya kubadda
Xaqiiqada arrintu waa duruufahani waa ka duwan yahay. Shakhsiyaadka ka soo jeeda dhammaan noocyada kala duwan ee asalkoodu kala duwanyahay waxay heli karaan tattoos sida tan si ay u noqdaan kuwo ka sii fiican. Xitaa haddii aanad wada-hawlgal ahayn, waxaad wali ka heli kartaa tattoo-kan oo qof walba ka hadlayo, tattoo u dhigma.
16. Saaxiibbadu waxay la mid yihiin tattoo
Qaar ka mid ah dadku waxay tageen qolal tattoo waxayna soo arkeen shakhsiyaadka barayaasha ah, booliisyada iyo daryeelayaasha caafimaadka ee soo galaya. Si kastaba ha noqotee, marka ay arkaan sawirada isku dhafan, waxay diyaar u yihiin inay isku dayaan inay ku dhajiyaan tattoo u dhigma.
17. Taageero tattoo u dhigma
Miyaad jeceshay tattoo-tashigan inta badan meelaha aad booqatay? Xirmada tattoo waxay noqotaa hal-abuur sababtoo ah qaabka farshaxan-yahannadu u hubinayaan in tattoo kasta oo u muuqda mid muuqda oo qabow.
18. Garbaha isweydaarsiga tattoo
19. Aqoonta isweydaarsiga
Helitaanka tattoo isweydaarsiga maaha sida xaaraan ah. Waqtiga la soo dhaafay, shakhsiyaadka ayaa hoos u dhigay shaqaaleysiinta tan iyo markii ay lahaayeen tattoos, hase yeeshee taasi kiiskan ma ahan. Si kastaba ha noqotee, tattoos isku midka ah ayaa noqday mid ka mid ah sawirada ugu quruxda badan.
20. Taabuubka laysku wadaago
Qaar ka mid ah ururrada ayaa laga yaabaa inay ku weydiistaan ​​inaad ku daboosho, hase yeeshee waxay si aan macquul ahayn u diidi doonin inaad shaqeyso tan iyo markii aad leedahay tattoo. Dhowr maamulayaal ma keenayaan su'aasha ilaa kulan. Haddii aad haysato nooca tattoo u dhiganta, waa la dabooli karaa.
21. Tartoo u dhigma suumanka
Haddii aad ka fekereyso helitaanka tattoo, laakiin aadan hubin waxa ku jira dukaanka tattoo, ka dibna waxaad u maleyneysaa in aad u baahato si aad u hesho dhammaan xogta aad u baahan tahay. Xirmada dhar-xidhka ayaa ah qaar ka mid ah taatikada ugu fiican iyo isku-xirnaanta ee aad isticmaali karto.
22. Tattoo isku dhafka ubaxa
23. Tattoo isku dhafan oo fudud
24. Tattoo midab yar
Tartoo ubax badanmuusikada muusikadatattoo tilmaanDhaqdhaqaaqatattoos gacantalammaanahaTilmaamta jaalaha ahgaraacista gacmahatattoo dheemanTattoo infinitytattoo ah octopussawirada gabdhahataraagada kubbaddatattoos qorraxdacalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u aharrow Tattoosawirada malaa'igtatattoos eagletattoos sleevesawir gacmeednaqshadeynta mehnditattoos taajkiilaabto laabtaku dhaji tattoosfikradaha tattoowaxay jecel yihiin tattoosgadaal u laabokoi kalluunkatattoos saaxiib saxa ahjimicsiga bisadahatattoos cagtatattoo biyo ahtattoos iskutallaabtasawirrada raggatattoo indhahaJoomatari Tattoostattoo maroodigatattoos qosol lehhenna tattoowaxaa la dhajiyay tattoostattoos ubaxshaatiinka shiidantattoos qoortashimbir shimbirTattoos Wadnahatattoos moonTattoo Feathertattooslibto libaaxtattoos qabaa'ilka